Sacuudiga oo sheeko kale oo yaab leh kasoo alifay dilka Jamal Khashoggi - Caasimada Online
Home Dunida Sacuudiga oo sheeko kale oo yaab leh kasoo alifay dilka Jamal Khashoggi
Sacuudiga oo sheeko kale oo yaab leh kasoo alifay dilka Jamal Khashoggi
Riyadh (Caasimadda Online) – Dowladda Sacuudiga ayaa wajaheyso cadaadis xoog badan oo ku aadan qaabkii loo dilay qoraagii dalkaas u dhashay ee Jamal Khashoggi, iyadoo ay hadda soo baxayaan warar kale oo ku saabsan qaabka qoraagan loogu dilay Safaaradda Sacuudiga ee Magaalada Istanbul.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegayo in Saraakiil ka tirsan Dowladda Sacuudiga oo diiday in magacooda la adeegsado ay sheegeen in dilkaan loo adeegsaday 15 ka tirsan Sirdoonka Sacuudiga kuwaas oo 2 October kula dagaalamay Wariyahaan gudaha Safaaradda iyagoo ugu dambeyn u adeegsaday cirbad sidaasna afka looga xiray laguna dilay gudaha Safaaradda.
Wararka aya faafineyso Reuters ayaa soo xigtay xogtan cusub, iyadoo xogtaha ugu muhiimsan ay ku saabsan yihiin sida loo diyaariyey kooxda Sacuudiga ah ee magaalada Istanbuul tagtay, taasoo mas’uul ka ahaa dilka Saxafiga.
Warbixinta iyo xogta laga soo xigtay mas’uulkan ayaan ku soo koobnay sida soo socota:
Ku-xigeenka Madaxa Sirdoonka Sacuudiga Axmed Casiiri ayaa diyaariyey koox ka kooban 15 sirdoonka iyo amniga ah oo la kulanta Saxafiga Jamal Kashoqgi, si ay ugu qanciyaan inuu ku laabto Sacuudiga.
La-taliyaha Dhaxal -sugaha Sucuud Alqaxdani ayuu Casiiri ka dalbaday inuu kooxda tegeysa Istanbuul ku daro qof ay is yaqaanaan Jamal Kashoqgi, (Waxaana sida muuqata inuu yahay Maahir C/casiis Almudrib.
Kooxda markii ay xarunta Qunsuliyadda Sacuudiga kula kulantay Jamal Kashoqgi, inuu Maahir ugu hanjabay Saxafiga inuu sumeyn doono oo la qafaali doono, kadibna waxaan dhex maray dood keentay inuu qeyliyo Jamal, taasoo keentay inay afka ka xiraan, sidaasina uu ku dhintay.
Qorshaha wuxuu ahaa in Jamal Kashoqgi in la geeyo Guri ku yaalla duleedka Istanbuul, marka uu diido inuu ku laabto Sacuudiga, lana sii daayo markii danbe, balse si khaldan xaaladu u dhacday.
Nin u eg Jamal oo lagu magacaabo Mustafa Madani ayaa ku lebistay dharkii Jamal Kashoqgi, isagoo ka baxay albaabka danbe ee Qunsuliyadda si loogu maleeiyo Jamal.
Qof Turki ah ayaa loo dhiibay Meydka Jamal Kashoqgi si uu uga takhaluso.
Kooxda falkan fulisay waxay diyaariyeen warbixin been ah oo ah inuu Jamal Kashoqgi ka tegay xarunta Qunsuliyadda Istanbul.
Kooxda waxay sheegteen inay degdeg uga tageen Turkiga markii ay fasaxeen Jamal Kashoqgi.
15-ka qof ee ka danbeeyay kiiska dilka Jamal Kashoqgi iyo saddex qof oo kale waxaa lagu xiray Sacuudiga, iyadoo uu baaritaan ku socdo.
Qisada uu Sacuudiga ka diyaariyey qaabka uu u dhacay dilka Saxafiga Jamal Kashoqgi ayaa ujeedkeedu yahay in lagu muujiyo in madaxda sare ee Sacuudiga aysan ka war heynin ama been loo sheegay iyadoo arrintan laga wareejinayo tuhunka saaran dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salman.
Warkan oo Sacuudigu u dusiyey wakaalada wararka ee Reuters ayaa ka hor imaanaya wararkii hore ee Turkigu shaaciyey, waxaana ka muuqda inaysan ahayn mid la rumeysan karo iyadoo ay ka muuqato inaysan suuragal ahayn in la rumeysto qaabka Sacuudiga u dhigay.
Madaxda ugu sareyso dalka Sacuudiga ayaa dareemayo ciriir siyaasadeed oo kaga imaanayo dilkaan ay ka geysteen meel ka baxsan dalkooda weliba wadan awood Militari leh.
Boqorka dalka Sacuudiga ayaa ka shaqeenayo sidii kiiskaan looga wareejin lahaa wiilkiisa maadaama la aaminsan yahay inuu isaga ka dambeeyo, waxaana arrintaan dusha looga tuuray Taliyaha Sirdoonka iyo ku xigeenkiisa lamana ogo haddii ay tahay siyaasad lagu sirayo Ra’yul Caamka.
Wariyaha la dilay ayaa si weyn uga soo horjeeday Dowladda Sacuudiga wuxuuna ahaa nin si weyn uga war qabo qoyska hayo talada Sacuudiga, waxayna dowladda ka cabsatay inuu banaanka keeno sir badan oo uu ka ahay taasoo keentay in ugu dambeyn hilibkiisa la jarjaro.